एक्कै छिन हांसौ न ! ( भिडियो )
एक्कै छिन हांसौ न !। नेपाली व्यवसायी विनोध चौधरी विश्वको १५ सय ६१ औं धनी बनेका छन्। अमेरिकी फोर्ब्स पत्रिकाले निकालेको विश्वका २ हजार २ सय ८ अर्बपतिहरुको सूचीमा चौधरी १५ सय ६१ औं स्थानमा परेका हुन् । गत साल उनी धनाढ्य सूचीको १५ सय ६७ औं स्थानमा थिए ।
It's all in the details 🎨
एक्लोपनः डरलाग्दो समस्या कि फाइदाजनक ?
अहिले हामी घण्टौसम्म एक्लै बिताउन सक्छौं । हामीलाई गफ गर्न साथी चाहिँदैन । समय विताउन कुनै काम चाहिँदैन । फेसबुकमा अल्झिएर वा कुनै ग्याजेट्समा गेम खेलेर घण्टौं एक्लै बस्न सक्छौं । भर्चुअल संसारमा हामी यसरी हराउन सक्छौं कि, आफैलाई समेत भुलिदिन्छौं । परिवारजन, साथीभाई सबैसँग बिमुख भइदिन्छौं । तर, यसको साइड इफेक्ट के छ भने, हामी सामाजिक जीवनबाट पनि बिमुख हुँदै जान्छौं । अर्थात एक्लिदै जान्छौं ।
जबकी मानिस एक सामाजिक प्राणी हो । पेट भरेर मात्र हाम्रो जीवन चल्दैन । जीवन चल्नका लागि हामीलाई खुसी, उत्साह, उमंग, दुखसुख सबै कुरा चाहिन्छ । आपसमा मिलजुल गरेर, सर-सहयोग लिएर, दुखसुख बाढेर, चाडपर्व मनाएर हामी सामाजिक जीवन व्यतित गर्छौं । मानविय जीवनमा यी कुराहरु आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ ।
यद्यपी कतिपय मानिस एक्लो बस्न रुचाउँछन् । कसैसँग घुलमिल हुन रुचाउँदैनन् । भोज भत्तेरमा सामेल हुन रुचाउँदैनन् । एकान्तमा नितान्त एक्लो बस्न रुचाउँछन् ।
भनिन्छ, यसरी एक्लिनु आफैमा समस्या हो । डरलाग्दो समस्या । यसले कुनै दीर्घ रोगले जस्तै शरीरलाई हानी गर्छ ।
अर्कोतिर, यसरी एक्लोपनमा रमाउनु फाइदाजक रहेको तर्क पनि गरिन्छ । एक्लोपनले मानिसको रचनात्मक क्षमता बढ्ने बताइन्छ ।
एक्लोपन एक समस्या
यदि सामाजिक जीवनबाट अलग रहेर एक्लै बस्छौं वा एक्लै बस्न रुचाउँछौं, यो एक समस्या हो । दुखको कुरा हो ।
जब कुनै व्यक्ति एक्लो हुन्छ, त्यो एक हिसाबले सजाय बराबर हो । एक्लोपनले मानिसलाई खुसी होइन, दुख दिन्छ ।
दुखलाग्दो चाहि के भने, अहिले विश्वमै मानिस एक्लोपनको शिकार बन्दैछन् । एक्लोपनबाट मुक्ति पाउनका लागि उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक भइसकेको छ । कति त उपचारका लागि धाइरहेका पनि छन् ।
त्यसो भए, के एक्लोपन खतरनाक छ ?
एक्लो रहँदा के हु्न्छ ?
एकातिर एक्लोपन ‘समस्या’को रुपमा देखिदैछ भने, अर्कोतिर यसको पक्षमा वाकलत पनि हुने गरेको छ । अमेरिकी लेखिका एनेली रुफसले त ‘पार्टी अफ वनः द लोनर्स म्यानीफेस्टो’ नामक किताब नै लेखेकी छिन् । किताबमा लेखिएको छ, ‘एक्लो रहनु एकदमै आनन्ददायक छ । तपाई स्वंम आफुमा केन्दि्रत रहन सक्नुहुन्छ । तपाईको सिर्जनसिल क्षमता बढ्छ । मानिससँग बसेर अनावश्यक कुराकानी गर्न, हासीमजाक गर्नबाट बच्नुहुन्छ ।’
यता बिटि्रश रोयल कलेज अफ जनरल प्राक्टिशनर्स भन्छ कि, एक्लोपन मधुमेह जस्तै भयानक बिमारी हो । यसले पनि त्यती नै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, जति मधुमेहले हुन्छ । एक्लोपनले हाम्रो सोच्ने, सम्झने क्षमता कमजोर हुन्छ । एक्लोपनले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर बनाउँछ ।’
एक्लोपनले रचनात्मक क्षमता बढ्ने
अर्कोतिर के पनि तर्क गरिन्छ भने, एक्लोपनले मानिसको रचनात्मक क्षमता बढ्छ ।
साथीहरुसँग दुरी बनाउनु, भोज भत्तेरमा सामेल नहुनु आफैमा फाइदाजनक हुने बताइन्छ । अमेरिकाको सैन जोस युनिभर्सिटीको ग्रेगरी फीस्टले यसबारेमा रिसर्च गरेको थियो । त्यसको नतिजा के देखियो भने, ‘आफु स्वंमसँग समय बिताउनु आफ्नो लागि फाइदाजनक छ । यसले रचनात्मक क्षमता बढाउन एकदमै सहयोग गर्छ ।’
एक्लोपनले आत्माविश्वास समेत बढ्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
जब हामी एक्लो हुन्छौं, तब अनावश्यक झै-झमेला, तनाव, हो-हल्ला आदिबाट मुक्त हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि कुरामा गहिरो चिन्तन गर्न सकिन्छ । बिगतका कुराहरु स्मरण गर्न सकिन्छ ।
किन एक्लो रहन चाहन्छन् ?
अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयकी मनोवैज्ञानिक जूली बोकरका अनुसार मानिसहरु तीन कारणले एक्लो रहन वा अरु व्यक्तिसँग घुलमिल हुनबाट बच्न चाहन्छन् ।
कोही लजालु हुन्छन्, त्यही कारण उनीहरु अरुसँग घुलमिल हुँदैनन् ।
कतिपय व्यक्ती रसरंग, हो-हल्लामा जान रुचाउँदैनन् ।
कतिपय चाहि यस्ता पनि हुन्छन्, जो मिलनसार भएर पनि एक्लो रहन रुचाउँछन् ।
धर्ममा एक्लोपनः चिन्तन-मननको सल्लाह
हिन्दु धर्मदेखि बौद्ध धर्मसम्म, एक्लो रहेर तप गर्नु र चिन्तन मनन गर्नु सल्लाह दिइन्छ ।
जब हामी एक्लो हुन्छौं, हाम्रो मस्तिष्क आरमको मुद्रामा आउँछ । अर्थात मस्तिष्कले आरम पाउँछ ।
ग्रेगरी फीस्ट भन्छ, यदि मानिस एक्लो रहन्छन् वा एक्लै समय बिताउँछ भने त्यो फाइदाजनक छ ।
तर, भिडभाड, रसरंग, भोज भत्तेरमा रमाउन बानी परेका मानिसहरु जब एक्लोपनको शिकार हुन्छन्, त्यो दुखको कुरा हो ।
राम्रो त के भने, मन मिल्दो साथी बनाउनुपर्छ । उनीहरुसँग हामी क्वालिटी टाइम बिताउनुपर्छ । बीच-बीचमा थोरै समय रमाइलोमा बिताउनुपर्छ । स्वंममाथि केन्दि्रत रहनुपर्छ । चिन्तन मनन गर्नुपर्छ । यस किसिमको तालमेल बनाउनु नै सबैभन्दा राम्रो हो । -एजेन्सीको सहयोगमा
सुहागरातमा गर्नैपर्ने र गर्नै नहुने ब्यबहारहरु, यी कुरा ख्याल नगरे जीवन बर्बाद ! (टिप्स)
सुहागरात भन्नासाथै सबैलाई एकप्रकारको रोमाञ्च, डर अनि बेग्लै प्रकारको अनूभति हुन्छ। चाहे केटा वा केटी, विवाहित वा अविवाहित। विवाहितलाई सम्झना हुन्छ, अविवाहितलाई त्यो अविष्मरणीय रात्रीको कल्पना हुन्छ जुन रात आफ्नो मनको राजकुमार या राजकुमारीसँग पहिलोपल्ट बित्नेछ। यसै रातबाट तपाईको जीवन नयाँ किसिमले अगाडि बढ्दछ। त्यो रात कति व्यक्तिका लागि सुखद रहन्छ भने कतिका लागि दु:खद।
भनिन्छ पहिलो प्रभाव नै अन्तिम प्रभाव हो । सुहागरात त्यही पहिलो प्रभाव छाड्ने रात हो जसको प्रभाव, स्मरण तपाईको जीवन साथीलाई जीवनभर रहन्छ। दाम्पत्य जीवनको सफलता र विफलतामा पनि यस रात्रिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। अधिकांश पुरुष मित्रहरुलाई यो लाग्ने गर्दछ की यस रात यौन सम्पर्क गर्नका लागि लाल मोहर लगाइएको समय हो। यसैले पनि प्राय यस रात्रिमा कुराकानी भन्दा पनि पहिला श्रीमतीको कपडा खोली लाठी चार्ज शुरु भै हाल्छ बलत्कारिक स्वरुपमा।
अनि जब जोश, जाँगर बीर्यसँगै बाहिरिन्छ अनि लल्याकलुलुक भएर एकापल्टी पल्टेर केही बेरमै घुर्दछन्। कतिले त बर्सौको प्रतिक्षा पछि पाएको माल भनी त्यही रातमा ३-४ पटक पनि भ्याउँछन्। अनि कुमारीत्व परिक्षण गर्ने सुरमा कति श्रीमानहरु श्रीमतीको यौनांगमा घोचेर रगत चुहाउने प्रयास, परीक्षण पनि गर्दछन्। न श्रीमतीको इच्छा बुझिन्छ, न भावना, न पीडा, दु:ख नै बुझिन्छ। श्रीमतीको सम्मान त निकै परको कुरा हो।
सुहागरातको समयमा नव दुलहीको मानसिकता कस्तो हुन्छ ? घर, परिवार, मानिस सबै नै उनको लागि नौलो भइरहेको एकातर्फ हुन्छ भने अर्को आफ्नो बाबु, आमा, इष्टजनसँगको विछोडको पीडा। दीनभरको थकान त छदैँछ साथमा डर, संकोच अनि त्रास। उनको भावना यो हुन्छ कि आफ्नो जीवनमा पति बनेर आएको यस व्यक्तिले यो नयाँ परिवारमा उनलाई संरक्षण दियोस्, माया दियोस्, आत्मीयता दियोस्, अपनत्व दियोस्, उनको दु:ख बुझ्ने प्रयास गरोस्। उनको त्यहाँ आफ्नो भन्नु नै त त्यही नवदुलहा त हुन्छ नि जसको नातामा, आडमा नयाँ परिवारमा प्रवेश भएकी हुन्छिन्। जसको भरोसा गरेको हुन्छ उसैले आफूलाई लुट्दछ, बलात्कार गर्दछ भने कस्तो मानसिकता निर्माण होला जब पतिले उनलाई होइन उनको शरीरलाई प्रेम गर्दछ, उपभोग गर्दछ, अर्धांगिनी होइन केवल वासना मेटाउने मेशिन ठान्दछ।
अर्को कुरा पहिलो रात्रिमा नै दुलहीको दुलहासँग राम्रो हेलमेल, चीनापर्ची, कुराकानी भइसकेको हुँदैन, राम्ररी खुली सकेकी हुदिनन्। यस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्कमा बराबरको सहभागीता जनाउन सक्तिनन् । हुन त अहिलेका युवतीलाई यौनका बारेमा थाहा नहुने त होइन, अश्लील सिनेमा हेरेर, भिडियो हेरेर, वेभ साइटबाट, पत्रपत्रिका पढेर, साथी संगीको अनुभव सुनेर धेरै यौनज्ञान पाइसकेका हुन्छन्। तर ती पाएको ज्ञानलाई पहिलो रात्रिमा प्रयोग गर्न सक्तैनन् किनकी पतिले उनलाई चालू केटी नठानोस्, अनुभवी नठानोस् भनेर। जब यस्तो मानसिकतामा दुलहालाई पूरा सहयोग गरिदैन तब केही समयको पेलाइ पछि पुरुष त झर्दछ अनि एकतर्फ पल्टन्छ। तर उनको अवस्था भने नाजूक हुन्छ। पतिले यौन भावना जागृत गराइदिन्छ, वासनाको आगो सल्काइदिन्छ तर निभाउन सक्दैन। न यो कुरा भन्न नै सक्दछिन् न त शान्त हुन सक्दछिन्। अनि यौन तड्पाइमा रात बिताउनु बाहेक विकल्प रहन्न जुन निकै पीडादायक हुन्छ।
कुमारीत्व परीक्षण गर्नु पत्नीको अविश्वास गर्नु नै हो। फेरी प्रथम सहवासमा योनीबाट रगत बग्नु र नबग्नु बाट कुमारीत्व प्रमाणित हुन सक्तैन भनेर त प्रमाणित नै भइसकेको छ। यसको आधारमा उनीमाथि लांछना लाउनु, अपमान गर्नु राम्रो होइन। यदि विगतमा कसैसँग त्यस्तो सम्बन्ध रहेको नै रहेछ भनेपनि त्यसलाई अन्जानमा, अपरिपक्व भएर, नबुझेर गरेको सम्झी क्षमा गर्नसक्नुपर्दछ। बरु यसकुरामा अझ शंका गर्ने, अपहेलना गर्ने भन्दा झन् बढी माया दिने प्रयास गर्नुपर्छ ताकि उनले विगतलाई बिर्सन सकुन्।
सुहागरातमा के गर्ने त ?
माथि नै भनिसकेको छु कि पहिलो रात नौलो ठाउँ, नयाँ घर, नौलो परिवार, नौलो व्यक्तिसँग बिताउनु अनि आफन्तहरुसँग विछोड हुँदाको समयमा नव दुलहीको मानसिकता कस्तो हुन्छ भनेर। कता कता डर, कता कता लाज, कता कता संकोच, भइरहेको हुन्छ। आफ्नो मान्छेको साथ खोजीरहेको हुन्छ एक अवला आत्माले। त्यहाँ आफन्त भन्नु नै त दुलहा हुन्छ। सुहाग रातमा प्रेम, अपनत्व, आत्मीयता प्रदर्शन गर्दै पतिपत्नी दुवैले एक अर्काको मन जीत्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। नवदुलहीलाई कसरी आत्मीयता दिने भन्ने कुरा मेरा मित्रहरुलाई राम्ररी नै थाहा होला। मेरो विचार चाही यस्तो छ।
जब सुहागरातको रात्रिमा कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यस समयमा सम्भव हुन्छ भने गुलाफको अथवा अन्य कुनै सुन्दर फूल पनि साथै लानुहोस्। कोठामा नवदुलही तपाइँकै प्रतीक्षामा हुन्छिन्। कोठामा प्रवेश गरेको संकेत दिनुहोस्। अनि भित्रबाट ढोकाको चुक्कुल लगाएर बिस्तारै उनीसामु जानुहोस्। प्राय नवदुलहीहरु घुम्टो ओढी लाजले आँखा झुकाइरहेका हुन्छन्। घुम्टो विस्तारै हटाएर उनको चिउँडोमा एक हातले समाइ उनको झुकेको शीरलाई विस्तारै माथि उठाउनुहोस् जसबाट आँखा आँखा जुध्न सकोस्। अनि आफूले ल्याएको फूल उनको हातमा दिँदै नयाँ घरमा, नयाँ परिवारमा, आफ्नो जीवनमा उनलाई हार्दिक स्वागत छ भनी दाम्पत्य जीवनको सफलताको लागि शुभकामना दिनुहोस्। अनि भन्नुहोस् कि -’समयले आज हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। तिमी र म एउटै भयौँ।
मेरो सम्पूर्ण तिम्रो अनि तिम्रो मेरो भयो। मेरो जीवन तिम्रो अनि तिम्रो जीवन मेरो, मेरो परिवार तिम्रो अनि तिम्रो परिवार मेरो भएको छ। आफन्तसँग विछोडको जुन दु:ख अनुभव गरीरहेकी छौ त्यो मलाई पनि अनुभव भइरहेछ, आखिर तिम्रो बुबा, आमा, आफन्त मेरो पनि त आफ्नै हुनुहुन्छ।
फेरी हामी चाढैँ नै उहाँहरुलाई भेट्न जानेछौँ। अब त झन् हाम्रो परिवार ठूलो भएको छ, आफन्तहरुको संख्या बढेको छ, यो परिवार पनि तिम्रो आफ्नै परिवार मान्नू, बुबा आमालाई आफ्नै बुबा अमा सम्झनू। तिमीलाई घरबाट प्राप्त हुने माया यहाँ पनि प्राप्त हुनेछ। म तिमीलाई आफ्नै आधाअंग मानी धेरै भन्दा धेरै माया दिने प्रयास गर्नेछु।
मलाई नजीकको साथी सम्झनू। हरेक सुख, दु:खहरु हामी एक अर्कालाई बाढ्नेछौँ। पारस्परिक सहयोगबाट एक अर्काको न्यूनता पूरा गर्दै दाम्पत्य जीवनलाई सफल बनाउनु छ। केही समस्या आई परेमा बिना संकोच मसँग भन्नू, हामी दुवै मिलेर त्यसको समाधान तर्फ लाग्नेछौँ। ‘ आदि जस्ता कुराहरु गरेर उनलाई आत्मीयता, अपनत्व तथा प्रेम प्रर्दशन गर्नुहोस्। उनीसँग कुरा गर्दा भावनमा ठेस पुर्याउने शब्दहरु ननिकाल्नुहोस्। श्रीमतिलाई घरको देवी सझेर सम्मानको भावना राख्नुहोस्।
दुलहीको संकेत पाएमा पहिलो रातमा नै सम्भोग गर्न नसकिने होइन। तर सम्भोग पूर्व भविष्यका योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। सन्तान कहिले जन्माउने? केही बर्ष पछि हो भने अहिले कुन प्रकारको अस्थाइ परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने? आदिबारे दुवैको सल्लाहपछीमात्र निर्णय गर्नु राम्रो हो। पहिलो रातमा नै यी कुराहरु खुलस्त हुन गार्हो हुनसक्छ, यसैले केही दिन पछि मात्र सम्भोग गर्नु राम्रो होला जस्तो मलाइ लाग्दछ। नवदम्पतिहरु एक अर्कामा हेलमेल हुन सकून् भनेर नै हाम्रो समाजमा विवाहको २-३ दिन पछि नै दुरान फर्काउने, हनिमुन मनाउने चलन चलेको होला, यात्राको क्रममा परिवारजनबाट टाढा रहँदा सहज होस् भनेर। समभोग भनेको नै बराबर भोग गर्नु हो। जब दम्पतिहरु एक अर्कामा खुलस्त हुन्छन् तब मात्र सम्भोग हुनसक्छ।
हुन त विवाहको उद्धेश्य वासना पूर्ति गर्नुमात्र होइन, यसभन्दा महत्वपूर्ण अरु धेरै छन्। निश्चय नै विवाहले समाजमा यौनजन्य अपराधहरुमा कमी ल्याउँछ, यौनवासना भड्कीनमा नियन्त्रण गर्दछ, वासनालाई निकास प्रदान गर्दछ। तर वासनामा नै लिप्त हुनु विवाहको उद्धेश्य होइन, बरु यौन सुख भोग्दै बिस्तारै बिस्तारै कालान्तरमा यस प्रति वैराग्यता उत्पन्न गर्नु हो।
माइग्रेनको समस्या छ ? यी ८ कुराहरुमा ध्यान दिनुस्
हामी मध्ये कोही माइग्रेसको समस्या पिडित हुन सक्छन् । यसका लक्षणहरुमा आधा टाउको दुख्ने, बेलाबेलामा बेस्सरी टाउको दुख्ने, कन्चट दुख्ने, चक्कर लाग्ने, वाक वाक लाग्ने, वान्ता हुने, घाम वा भीडभाडमा जाँदा टाउको दुख्ने, रिस उठ्ने पर्दछन् । यदि माइग्रेनको समस्या छ भने केही कुराहरु ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ अकुपञ्चरिष्ट ब्लुलोटस अस्पताल, टेकु काठमाडौंमा कार्यरत अकु. विशाल श्रेष्ठले माइग्रेनको समस्या भएकाहरुले ध्यान दिनु पर्ने केही कुराहरु उल्लेख गर्नु भएको छ ।
१ गुन्द्रुक, सिन्की, तामा तथा बोतलको पुरानो अचार नखाने ।
२ दही, मही, पनिर, आइसक्रिम, कफी चकलेट नखाने ।
३ कोक, बियर, रक्सी, वाइन ९बन्द बोतल पेय पदार्थ ०को सेवन नगर्ने ।
४ चम्किलो प्रकाश र भीडभाडबाट टाढै रहने ।
५ अति दुर्गन्ध तथा बास्ना आउने ठाउँ नजिक नजाने ।
६ भोको पेट नबस्ने, पानी तथा फलफूल प्रशस्त मात्रामा खाने ।
७ चिन्तामुक्त भएर बस्ने कोशिश गर्ने
८ कम्तिमा पनि ६ देखि आठ घन्टा आरामले सुत्ने ।-dainikonline
हाम्रो घर वा डेरामा जहाँ भएपनि ऐना अनिवार्य नै हुन्छ । ऐनाबिना त मानिसको सुन्दरता अधुरो नै रहन्छ भन्दा पनि हुन्छ । तर घरमा ऐना राख्दा जहाँ मिल्यो त्यहीँ राख्नु चाँहि हुँदैन किनभने ऐनाले धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । घरमा सही स्थान र दिशामा राखिएको ऐनाले तपाइँलाई शुभफल समेत दिन सक्छ ।
बास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा ऐना राख्दा यी १० कुराहरु भुल्नु हुँदैन :
१. तपाइँले ऐना जहाँ राखे पनि उत्तर पूर्व दिशामा पर्ने गरी लगाउनुपर्छ । यसले तपाइँको आम्दानीको श्रोत बढाउन मद्दत गर्छ ।
२. ऐना राख्दा कुनै पनि नराम्रो बस्तु ऐनामा पर्ने गरी नराख्नुस् । सकेसम्म ऐनाबाट राम्रो बस्तुको प्रतिबिम्ब आउनु राम्रो मानिन्छ ।
३. ऐना यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ जुन ढोका वा झ्यालको सामना नहोस् ।
४. कुनै पनि कोठामा चारैतिर ऐना राख्नु अशुभ मानिन्छ । यस्तो ऐना भएको कोठामा धेरै समस्या आउने बास्तुशास्त्रको दावी छ ।
५. घरमा अँधेरो भइरहने स्थानमा गोलो ऐना राख्नु राम्रो मानिन्छ यसले घरमा भएको नकारात्मक उर्जा घटाउन मद्दत गर्छ ।
६. सुत्ने कोठामा सकेसम्म ऐना नराख्नुस् । ओच्छ्यानको सामुन्ने त राख्दै नराख्नुस् । यसले तपाइँको जीवनमा सम्बन्ध विगार्न सक्छ ।
७. ठूलो तर हलुका ऐनालाई राम्रो मानिन्छ । घरमा जति ऐना भएपनि फरक पर्दैन तर फरक ऐनाको फुटेका २ टुक्रालाई जोडेर एक ठाउँमा भने नराख्नुस् । यस्तो निक्कै अशुभ मानिन्छ ।
८. बास्तुशास्त्रका अनुसार ऐना छोपेर राख्नु राम्रो मानिन्छ । सकेसम्म ऐना दराज खोल्दा देखिने भयो भने उत्तम मानिन्छ ।
९. घरको भित्तामा एकदम माथि वा तल पर्ने गरी ऐना राख्नु राम्रो मानिँदैन । यस्तो भयो भने घरका मानिसहरुलाई अनेक समस्या आउन सक्छ ।
१०. तपाइँको ऐना फुटेको वा धुलो वा फोहोर लागेको हुनु नराम्रो मानिन्छ । यस्तो ऐनाले घरमा नकारात्मक उर्जा पैदा गर्ने बास्तुशास्त्रको भनाइ छ ।
२० देखि ४० को उमेर हरेकको जीवनमा यस्तो समय हो जब व्यक्ति सबैभन्दा धेरै ऊर्जावान् हुन्छन् । यो उमेरमा मानिसहरु आफ्नो हरेक चाहना पूरा गर्न चाहन्छन् र यसका लागि हरसम्भव प्रयास गर्छन् । आफ्नो ऊर्जाको धुनमा तपाईं विभिन्न कुराहरु नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ जसले तपाईंको जीवनमा दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्छ र तपाईंले सम्झौताको जीवन जिउनका लागि बाध्य हुनुपर्ने सम्भावना निम्तिन सक्छ ।
स्वास्थ्यमा ध्यान नदिनुः
यो उमेरमा स्वास्थ्य र शरिरले तपाईंको साथ दिने गर्दछ । यो चक्करमा तपाईं आफ्नो खानपिनको विशेष ध्यान राख्नुहुन्छ । अनियमित खाना र जंक फुडले तपाईंको स्वास्थ्यलाई दिन प्रतिदिन नकारात्मक असर पुर्याइरहेको हुन्छ जसको असर बढ्दो उमेरसँगै देखिन्छ । भविष्यमा तपाईंको शरिर आवश्यकताभन्दा बढि कमजोर हुनसक्छ ।
बढ्दो उमेरमा तपाईं जतिसुकै पोषक तत्वले भरपुर भोजनको बानी बसाल्नुहोस्, तपाईंको शरिरले यसलाई पूर्ण रुपमा सोस्न पाउँदैन । त्यसकारण यो उमेरदेखि नै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खानेकुरा खान बन्द गर्नुहोस् र एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुस् ता कि तपाईंको शरिर बलियो रहोस् र बुढेसकालमा शारिरिक कमजोरीसँग जुघ्न नपरोस् ।
२० देखि ३० को उमेर यस्तो हुन्छ जब तपाईं कमाउन सुरु गर्नुहुन्छ र पहिलो पटक आफूलाई आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र महसुस गर्नुहुन्छ । धेरैजसो मानिसहरु यो स्वतन्त्रतालाई महसुस गर्नका लागि खानपिन र मोजमस्तीमा खर्च गर्दछन् । उनीहरु भविष्यका लागि कुनै योजना तयार गर्दैनन् र बचत गर्ने त उनीहरुको बानी नै हुँदैन । तपाईंले पनि सुन्नुभएको होला, समय सधैं एकैनासे हुँदैन त्यसकारण अहिले देखि नै बचतको बानी बसाल्नुहोस् । पछि परिवारको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आउँछ त्यसैले पनि यो समयमा बचत गर्नैपर्छ ।
धेरै मानिसहरु अवकाशपछि घुम्न रुचाउँछन् र युवावस्थामा पैसा कमाउन र आफ्नो भविष्यमा मात्र ध्यान दिन्छन् । तर पैसा कमाउने र भविष्यको चक्करमा नबिर्सिनुहोस् कि तपाईंको शरिर यो उमेरमा बढि उर्जावान् र बलियो हुन्छ । त्यसकारण घुमघाम र रोमाञ्चक क्रियाकलापका लागि योभन्दा उत्कृष्ट समय अरु हुनसक्दैन । पछि समय र पैसा हुँदा पनि तपाईं यी कुराहरु गर्न असमर्थ पनि हुनसक्नुहुन्छ ।
परिवारलाई समय नदिनुः
करियरलाई उत्कृष्ट बनाउने लोभमा आजकालका युवा यति धेरै व्यस्त हुन्छन् कि आफ्नो परिवारलाई समय दिन पनि पाउँदैनन् । अहिले तपाईंलाई अहिले केही फरक नपारेपनि भविष्यमा यो कुरा सधैं तपाईंको मनमा खट्किरहनेछ ।
विवाह गर्न हतार गर्नु वा नराम्रो सम्बन्धमा रहिरहनुः
मानिसहरुलाई लाग्छ कि काम पाउने बित्तिकै विवाह गर्नुपर्छ तर यस्तो हुनुहुँदैन । विवाह जीवनभरी निभाउनुपर्ने एक बन्धन हो । त्यसकारण जब तपाईंले सही जीवनसाथी पाउनुहुन्छ तबमात्र विवाह गर्नुहोस् । धेरै मानिसहरु विवाह त गर्छन् तर केही समयपछि नै समस्याबाट गुज्रन थाल्छन् ।
आमाबुवा वा बुढाबुढीको सल्लाह नमान्नुः
युवावस्था त्यस्तो बेला हो जहाँ तपाईंलाई आफूले गरेको सबैकुरा सही लाग्छन् । तपाईं नयाँ सोचसहित यति जोसमा हुनुहुन्छ कि अन्य सबै बिचार तपाईंलाई पुरानो र कमजोर लाग्छन् । तर नबिर्सिनुहोस् कि तपाईंका आमाबुवा जीवनको संघर्षमा तपाईंभन्दा अत्यधिक अनुभवी हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुलाई पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् ।
खराब जागिरमा अड्किरहनुः
थुप्रै पटक तपाईंले रुचाएको जागिर पाउनुहुन्न तर करियरको सुनिश्चितता वा आर्थिक परिस्थितीसँग जुघ्नका लागि तपाईं सम्झौता गर्नुहुन्छ र मन नलागे पनि काम गरिरहनुहुन्छ । यस्तो नगर्नुहोस् र तुरुन्त उक्त कामलाई छोड्नुहोस् नभएर केही समयपछि तपाईंले उक्त कामलाई महत्व दिन छाड्नुहुन्छ र तपाईंलाई आफ्नो जीवन नै व्यर्थ लाग्न सक्छ ।
आमा बुवाको खुसीका लागि आफ्नो सपना त्याग्नुः
तपाईं त्यो काममा मात्र सफल हुनसक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई राम्रो तरिकाले आउँछ । थुप्रै पटक मानिसहरु आफ्नो आमाबुवाको खुसीका लागि त्यो करियर पनि अपनाउने गर्दछन् जसमाथि उनीहरुको रुची नै हुँदैन । परिणाम यस्तो हुन्छ कि उक्त काममा उनीहरुको परफर्मेन्स औसत हुने गर्दछ । त्यसकारण समय हुँदा नै आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नुहोस् र त्यसतर्फ आफ्नो कदम बढाउनुहोस् । आमाबुवाले तपाईंलाई जीवन जिउने तरिका सिकाउन सक्नेछन्, तपाईंलाई संघर्षसँग लड्ने हिम्मत दिनसक्छन् तर यो जरुरी छैन कि उनीहरुले जुन काममा सफलता हाँसिल गरका छ त्यसमा तपाईं पनि निपुण हुनुपर्छ ।
यी हुन् किशोरीहरुले पहिलो महिनावारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
किशोरीहरुप्रायः १३ वर्षको उमेरदेखि महिनावारी हुन सुरु गर्छन् । कसैकसैमा १४ वर्षको उमेरमा पनि पहिलो महिनावारी सुरु हुने गर्दछ ।
नेपालजस्तो मुलुकमा १२ वर्षको उमेर देखि १४ वर्षसम्मको उमेरमा महिनावारी हुनुलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ ।
१३ वर्षको उमेरभन्दा पहिले र १५/१६ वर्षको उमेर पछाडी महिनावारी हुनुलाई चिन्ताको विषय मानिन्छ । यस्तो भए तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
सामान्यतया महिलाहरूमा हुने पहिलो माहिनावारीलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘मेनार्चे’ पनि भन्ने गरिन्छ । मेनार्चे कुन उमेरमा हुने भन्ने कुरा व्यक्तिको शारीरिक अवस्थाका साथै अन्य विभिन्न तत्वले निर्धारण गर्दछन् ।
कैयौं महिलाको पहिलो महिनावारी उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा पनि निर्धारण हुने गर्दछ । आमा तथा हजुरआमाको पहिलो महिनावारी कुन उमेरमा भएको हो, त्यसको आधारमा पनि ती घरकी महिलाको महिनावारी मापन गर्न सकिन्छ, जुन आनुवंशिक कारणहरूमध्येमा पर्दछ ।
वरिपरिको वातावरण तथा शारीरिक अवस्थाले पनि पहिलो महिनावारी कुन उमेरमा हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दछ । किनभने शरीरको सही वजन तथा बोसोले हर्मोनको उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । जसका कारण कतिपयमा समय अगावै महिनावारी हुने सम्भावना बढ्छ ।
पहिलो पटक महिनावारी हुनुभन्दा पहिले महिलाहरूको वजन थोरै भए पनि वृद्धि हुन्छ । पछिल्लो समय मोटोपनाको कारण पनि महिनावारीको समस्या बढ्दै गएको छ ।
विशेषगरी १२ भन्दा कम उमेरमै पहिलो पटक महिनावारी हुने महिलालाई स्तनको क्यान्सर, मोटोपना, टाइप-२ मधुमेह लगायतको खतरा बढी हुने गरेको ‘डायविटिक मेडिसिन’ नामक जर्नलमा उल्लेख गरिएको छ । साथै गर्भावस्थाका दौरान ती महिलाहरूलाई अन्यको तुलनामा थप जटिलता सिर्जना हुने गर्दछ ।
कुनै महिलाको महिनावारी दस वर्षको उमेरभन्दा पहिले वा १७ वर्षपश्चात भएमा उनीहरूमा मुटु सम्बन्धी समस्या, स्ट्रोक तथा उच्च रक्तचापको समस्या अन्य महिलाको तुलनामा अधिक हुने गर्दछ । त्यसैगरी १७ वर्षभन्दा पछि महिनावारी सुरु हुने महिलाहरूमा हड्डीको घनत्व कम भई ओस्पोरियोसिस तथा बे्रन स्ट्रोकको सम्भावना बढी हुने गर्दछ ।
जब कि १२ वर्ष पश्चात पहिलो पटक महिनावारी हुने महिलाहरू भने लामो आयु बाँच्ने गर्छन् ।
त्यस्तै, १२ वर्षको उमेरभन्दा पहिले नै महिनावारी हुने महिलाहरूमा महिनावारी सुक्ने सम्भावना ४० देखि ४४ वर्षको उमेर बीच हुने गर्दछ भने ढिला महिनावारी सुरु हुने महिलामा महिनावारी सुक्ने प्रक्रिया पनि ढिलै सुरु हुने गर्दछ ।
तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस
Copyright © iKantipur | Design and Developed by iKantipur